Manchester United Oo Udhaqaaqdey bedeøla Gool De Gea ayaga oona ka arkooday kooxda stoke. – kulaaad.com
Manchester United Oo Udhaqaaqdey bedeøla Gool De Gea ayaga oona ka arkooday kooxda stoke.
Goolhayaha kooxda Stoke Jack Butland ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa in uu ku biiro kooxda Manchester United.
24-sano jir ah ayaa lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo Arsenal bilowgii xagaagan, laakiin talo kooxdiisa Stoke usoo Jeedisey ayaa ahayd inuu kadoorbido Kooxda Manchester United
Xiddiga reer England ayaa u sheegay talkSPORT in hamiisa uu yahay inuu Champions League kacayaaro taasi uu arki karo hadii uu udhaqaaqo United hadii ay sopo dalbatana uu noqon doono mid aad u adag tahay in la iska diido.
“Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro Champions League, waxaana doonayaa inaan koobab ku guuleysto. Waxaan doonayaa inaan koox magic weyn leh ucayaaro sida Manchester United oo kale ; ayuu yiri Goolhaye Buntland
“Ma jirto sabab aan koobaba kula guuleysan karo Stoke, waxaan isku dayi doonaa inaan ku guuleysano koobab qaar ka mid ah iyo sidoo kale aan awoodno, laakiin iska cad inay leeyihiin himilooyin.
Ciyaaryahankii hore ee Birmingham ayaa sanadkii 2013 Stoke ugusoo biirey £ 3million , laakiin sida ay ahayd in uu horumarka uu haatan kujiro ayaa lagu qiimeeyo in lagu heli karo £ 30million.
Kooxda Manchester United ayaan wali jawaab kabixinin lacagta kooxda stoke sheegey in lagu heli karo shabaq ilaaliyahooda.
Sidoo kale kooxda Manchester United ayaa kaladooran doonta midkooda Shabaq Ilaalite Buntland Ama Donnaruma walina go aan magaarin .
Goolhayaha Hada jooga united ee De Gea Ayaa Mudo sanado ah lala xiriirinayaa Inuu udhaqaaqo horyaal spain gaar ahaan kooxda Real Madrid Wali isna xaalkiisa macadam United na mafasixin Real Na lacag miiska masoo saarin.